(Akhriso) Shan sababood oo waqti kordhinta ka dhigaysa lama huraan? laakiin farsamo u baahan!! - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Akhriso) Shan sababood oo waqti kordhinta ka dhigaysa lama huraan? laakiin farsamo...
(Akhriso) Shan sababood oo waqti kordhinta ka dhigaysa lama huraan? laakiin farsamo u baahan!!
Waxaa ka socda magalaada Muqdisho qalalaase siyaasadeed kaas oo salka ku haysa xiliga ay dhacayso doorashada Qaranka iyo qaabka loo qabanayo. Waxaa jira fikaro kala duwan oo iska soo horjeeda, fikiradaas ayaa ah kuwo siyaabo kala duwan uga tarjumaya danaha gaarka ee dadka hogaanka u haya siyaasadda dalka Soomaaliya. Qaarbaa danahooda ka arka in doorashada waqtigeeda lagu qabto , qaar kale waxa ay doonayaan waqti kordhin halka qaar kalana ku talinayaan in dowlada hada jirta isku shaandhayn lagu sameeyo iyadana ay hoowsha doorashada soo gaba-gabayso.
Si kastaaba ha noqoto, waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa soo cadaanaysa in ayan marnaba suuragal ahaynin in doorasho ku dhacdo dalka xiligii loogu talagalay, taas ayaana lama huraan ka dhigaysa in la helo farsamadii dadka oo wada qanacsan waqti kordhin u imaan lahayd.
Shan sababood ee hoos ku qoarn ayaana waqti kordhinta ka dhigaysa mid lama huraan ah:
Dowlada hadda jirtaa waxa ay si dadban ugu guulaysatay in iyada oo shacabka Soomaaliyeed soo taagan yahay, mucaardka dowladana daawanayo, beesha caalamka oo ka aamusan tahay ay sadax sano iyo afar bilood lumiyaan, waqti doorasho lagu qaban lahaana uu meesha ka baxo. Si doorasho u dhacdo waxa ay ahayd in waqtigaan lagu heshiiyay qaabka doorashada, hawlgelinta hay’adaha u xilsaaran fulinta doorashooyinka, iyo qabashada doorashada, laakiin intaba lama qaban, waqti lagu qabtana ma jiro.
Waqtiga doorashada la fulin lahaa oo ku beegan bilaha September & November 2020, waxaa ka haray sadax bilood, marnaba macquul ma aha in sadax bilood gudahooda doorasho dadban oo ah mida ugu fudud ee la qaban karo in dalka lagu qabto, taas oo ay sabab u tahay amni xumi, heshiis la,aan, maqnaashaha hogaan dowladeed ee lagu aamini karo qabasho doorasho, mucaaradka oo aan talo haynin iwm.
Marnaba ma ogolaan doonaan dowlad goboleedyada in Muqadishu laga soo magacaabo xildhibanada laga soo doorto deeganadooda, sidaas darteed, wax kastaa oo dhaca, marnaba suragal kama ahaan doonto in Sacid Deni, Axmad Madoobe iyo Qoor Qoor ay ogoladaan in Farmaajo iyo Kheyre ay ku aaminaan maamulka doorasho Qaran, taas oo meesha ka saaraysa in doorasho ay hogaanka u hayaan Kheyre iyo Farmaajo oo wada jira in aan marcaba la aqbali doonin,
RW Xasan Cali Kheyre waxaa uu burburiyay qayimkii xafiiska Ra’iisal Wasaaraha waxa uuna qol ku soo xareeystay koox wasiiro ah oo aan lahayn aqoon, qibrad, xiriir siyaasadeed ama fakar haba yaraatee ka haysta xaalada dalku maraayo xiligaan. Xafiiskiisa ayuu waxa uu ka sameeystay dowlad kale kaas oo ay uga adeegaan dhalinyaro yar yar oo laga keenay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Kenya. Sidaad darteed maba jiro awood aqooneed ama Wasiiro qaban kara howsha baaxada leh ee u baahan in la qabto si dalku doorasho u gaaro. Hadii maanta $100 Milyan la siiyo Dowada Farmaajo, oo dhamaan madaxda dowlada goboleedyada iyo mucaradka ka aamusaan, dalka doorasho kama qaban karaan, in laga sugana caqli ma aha.
Xildhibaanada Fedaraalka iyo Senetorada oo dhamaantood doonaya waqti kororsi iyaga oo og in aysan intooda badan soo noqon doonin taas oo culays ku keenaysa in doorashada xiligeeda lagu qabto.
Sida ku cad qodobada kor ku xusan, dalka marnaba doorasho ugama dhici karto shanta bilood ee ka hartay xiliga kala guurka ah ee doorasho dalka lagu qaban lahaa.
Mucaaradka dowlada waxaa u taal labo su’aal oo muhim ah in ay ka jawaabaan:
Sida muuqato Farmaajo iyo Kheyre hadii ay xataa aqbalaan in ay doorasho ku qabtaan xiligii horay loogu qorsheyeey, mucraadka dowladana ogolaado, waxaa lama huraan noqon doonta in ay dhowr bilood ay si dadban ugu darsadaan, iyaga oo markaas ku doodaya in ay hoowshii ay gudo galeen amaba ku guda jiraan, taas oo ayan diidi karin mucaaradka markaas, ilden horay ayaa ay u ogolaaden? Arintaan horay ayeey u dhacday oo dowladihii hore ayaa soo sameeyay! Sidaas darteed mucaraadka diyaar ma u yihiin in ay waqti dheeraad ah siiyaan dowlada hada jirta?
Iyo in ay hada ogolaadaan in la badalo Ra’iisal Wasaare Kheyre, mid cusubna lagu badalo, kaas oo iyaga laga talogalinaayo, Ra’iisal Wasaarahaasna uu ka soo shaqeeyo qabashada doorasho qof iyo cod ah, dib u heshiisiin Dowada Fedaraalka iyo Dowlad Goboleedyada, ka saara dalka kooxda Shabaab oo ay dhab ka tahay in uu dalka iyo dadkaba rajada ay ka qabaan dowladninada dib u soo celin kara, isla markaana leh khibrad, dowladgoboleedka ay aamini karaan, mujtamacana ku dhex leh magac iyo maamuus. Magacaabidda RW cusub wuxuu noqonayaa mid aay mucaaradka & madaxda Dowlad Goboleedyadaba aay saamayn ku leeyihiin, talo ku leeyihiin qaabka dalka loo hogaamin doono, dalka ka saari kara xaalada hada uu ku jirta.
Waxa ay talada saliimka ah ku jirtaa in caqliga shaqeeyo, dalkana laga saaro xaalada khatarta ah ee uu hada ku jiro. Hadii la isku dayo in dalka lagu qasbo doorasho aan dhici karin xiligeeda waxan shaki ku jirin in dagaal sokeeye dalka ka dhici doono, Farmaajo iyo Kheyre ay boorsadii ay la yimaadeen dalka ay qaadan doonaan, ileen wax kale oo ka yaala dalka ma jiraan.
Mucaaradka dowlada waxaa looga fadhiyaa in labada qodob ee kor ku xusan midkood qaataan? In qaladkaan dalka galana mucaardka ayaa raali ka ahaa ! Hadii kale ay abuuraan jawo Farmaajo dalka looga saaro iyada oo aan dhiig ku daadan, ileyn waa nin rabo in uu siyaasada ahaan dalka isku qarxiyo sidiii Siyad Barre.
Previous articleMW Muuse Biixi . waxaan Maxkamada ICJ geeyn doona kiiska ictiraaf raadinta
Next articleMadaxda G. Goboleedyada iyo D. Fedaraalka oo lagu kulansiinayo dalka Jabuuti